Fankatoavana didy hitsivolana :: Hivory tsy ara-potoana ireo Antenimiera • AoRaha
Nivoaka tamin’ny filan-kevitry ny minisitra, omaly, ny fiantsoan’ny fanjakana fivoriana tsy ara-potoana ho an’ny Antenimiera roa tonta. Haverina hankatoavina mandritra ny roa ambin’ ny folo andro, manomboka amin’ny 4 marsa 2020, ireo didy hitsivolana sivy noraisin’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry, fony mbola tsy nijoro ny Antenimieram-pirenena. Anisan’ny niteraka tsy fitovian-kevitra teo amin’ny Antenimieran-doholona sy ny Antenimieram-pirenena, amin’izao fotoana izao, io tranga io.
Etsy ankilany, efa nampitaraina ny filohan’ireo loholona, Rakotovao Rivo, teny anivon’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (Hcc) ny momba an’ireo didy hitsivolana navoakan’ny Filoham-pirenena. Ankilan’izay anefa ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine, nilaza fa “tsy ilaina fankatoavana intsony ny didy hitsivolana navoakan’ny mpitondra satria efa manome fahefana azy hanao izany ny lalàm-panorenana, amin’izao fotoana izao”.
Namoaka ny fanapahan-keviny momba io olana io ny HCC, tamin’ny 5 febroary lasa teo. “Mila dinihina anaty fivorian’ny parlemantera ireo didy hitsivolana noraisin’ny Filoham-pirenena”, hoy ilay fanapahana.